यि अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवतीले आफ्ना श्रीमानलाई निकै खुसी पार्छन् | सुदुरपश्चिम खबर
यि अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवतीले आफ्ना श्रीमानलाई निकै खुसी पार्छन्
जीवनसाथीको राम्रो–नराम्रो बानीले श्रीमान–श्रीमती दुबैलाई प्रभावित तुल्याएको हुन्छ । दुबैले एक अर्कालाई बुझ्नका लागि केही समय लाग्छ र पछि दुबैको बानी पनि पर्छ । यीमध्ये च् ए, क् बाट नाम सुरु भएका युवतीले आफ्ना श्रीमानलाई निकै खुसी पार्छन् ।
च् बाट नाम सुरु भएका युवतीहरुःजुन महिलाको आरबाट नाम सुरु हुन्छ, उनीहरु मनका निकै राम्रा हुन्छन् । उनीहरुको मन निकै सफा हुन्छ । उनीहरु अरुलाई खुसी राख्ने पूरा कोसिस गर्छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई निकै माया गर्छन् र भगवानमा उनीहरुको अत्यधिक आस्था हुन्छ ।
ए बाट नाम सुरु भएका युवतीहरुःउनीहरु आफ्ना श्रीमानसँग कुनै पनि कुरा लुकाउँदैनन् । यी युवतीहरु ठूलो सपना देख्नछन् र सफल नभएसम्म यसमा अडिग हुन्छन् ।
उनीहरुले जीवनमा पैसा र इज्जत दुबै पाउँछन् ।क् बाट नाम सुरु हुने महिलाःयो अक्षरबाट सुरु हुने नामकी महिला निकै सुन्दर हुन्छन् । उनीहरु जसलाई प्रेम गर्छन्, जिन्दगीभर उनीसँगको साथ निभाउँछन् । उनीहरुको यही कुराले अरुलाई आकर्षित गर्छ । तपाईंको पार्टनरको नाम पनि यो अक्षरबाट सुरु हुन्छ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ ।
ए बाट नाम सुरु भएका युवतीहरुःउनीहरु आफ्ना श्रीमानसँग कुनै पनि कुरा लुकाउँदैनन् । यी युवतीहरु ठूलो सपना देख्नछन् र सफल नभएसम्म यसमा अडिग हुन्छन् । उनीहरुले जीवनमा पैसा र इज्जत दुबै पाउँछन् ।
क् बाट नाम सुरु हुने महिलाःयो अक्षरबाट सुरु हुने नामकी महिला निकै सुन्दर हुन्छन् । उनीहरु जसलाई प्रेम गर्छन्, जिन्दगीभर उनीसँगको साथ निभाउँछन् । उनीहरुको यही कुराले अरुलाई आकर्षित गर्छ । तपाईंको पार्टनरको नाम पनि यो अक्षरबाट सुरु हुन्छ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ ।
कसरी गर्ने आइतबारको दिन सूर्य देवको उपासना ?
यस्तो हुन्छ आइतबार जन्मेका मानिसको भबिस्य !!
असिना र पानीबाट बालीलाई कसरी जोगाउने ?
यी दुइ राशि भएका मान्छेहरु बीच प्रेम र विवाह कहिल्यै सफल हुदैन !!
याद गर्नुहोस तपाईले फालेको एक गा‘स खानाले कसैको एक छाक टर्छ,त्यसैले खाना फाल्नु पा'प हो
आमाले गाउने गीत बच्चाहरुका लागि फाइदाजनक